Fikarohana lalan-kivoahana • AoRaha
Anisan’ny olana sedrain’ ny tantara an-tsehatra malagasy ny tsy fisian’ny toerana ahafahana manatanteraka izany. Ireo toerana filalaovana teatra hany sisa tafajoro, toy ny Teatra Monisipaly Isotry sy ny Tranompokonolona Anala­kely, aza dia jerem-po­tsiny toy ny tany nahalavoana. Tahaka ny sarimihetsika, dia saika lasan’ireo antokom-
pivavahana sasany tsy manana fiangonana ihany koa ireo toerana fiangaliana ny tantara an-dampihazo.
Tsy mbola hita taratra, hatreto, ny fanamboarana na fanavaozana farafahakeliny nambaran’ny minisiteran’ny Kolontsaina. Na eo aza ny olana mianjady amin’ny tontolon’ny teatra, tsy mitsahatra ny mikatsaka izay hampi­­velatra an’ity seha-javakanto ity ireo tropy rehetra mivondrona ao anatin’ny FMTM.
Nisy ny dingana vita eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Nambara tamin’ny fomba ofisialy tamin’iny taona 2018 ny maha mpikambana ny Fikambanan’ny mpanao teatra malagasy ao anatin’ny “Institut international du théâtre” (IIT). Sampana iray eo anivon’ny Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fampianarana, ny siansa ary ny kolontsaina (Unesco) izy io.
Efa elaela no nisy fiaraha-miasa teo amin’ny FMTM sy ny IIT, indrindra amin’ny fanamarihana ny Andro
maneran-tany ho an’ny teatra, isaky ny 27 marsa. Izany rahateo no antony nisafidianan’ny fikambanana ny fanom­bohana ny taona teatraly isaky ny volana marsa, nanomboka tamin’ny taona 1986.
Famoahana rakikira :: Mikononkonona ny «Bak’Antimo» i Lamtah